Ny Fandresena ny espaniola Ao Filipina Part - Ny mpisolovava ny Philippines! Filipiana mpisolovava, an-tserasera rehetra.
Ny Fandresena ny espaniola Ao Filipina Part
Ny fahatongavan'ny vahiny espaniola ao amin'ny firenena, ny tanjon ny espaniola mba handray ny sy hitarika ny FilipinaAmpiasaina avy amin'ny teny espaniola ho amin'ny hazo fijaliana ho an'ny toy Izany. Efa naka ny fanjakana mitambatra amin'ny hazo fijaliana.
Ny rehs nitarika ny fikambanana ara-politika, izy ireo ihany koa ny nametraka ny seranan-tsambo.
Ary izy ireo koa dia nanompo ny batisan ny jentilisa tompon-tany. Ampiharina izy 'ny tena foto-kevitra' izay napakaloob ny fandoavana ny hetra ny olona avy amin'ny sivy ambin'ny folo amby enim-taona antitra. Noho izany dia maro ny Filipiana ny fianakaviana ny mosary sy nijaly. Anisan'izany koa ny hampiharina dia efa mailo, ny fanaovana ampihimamba ny paraky, sy ny varotra galleon. Izany rehetra izany dia nahatonga ny fijaliana lehibe ny Filipiana. Ny fahatongavan'ny vahiny espaniola ao amin'ny firenena, ny tanjon ny espaniola mba handray ny sy hitarika ny Filipina. Ampiasaina avy amin'ny teny espaniola ho amin'ny hazo fijaliana ho an'ny toy Izany. Faharoa dia ny Fanjanahana izany dia maneho ny sabatra Efa naka ny fanjakana mitambatra amin'ny hazo fijaliana. Ny rehs nitarika ny fikambanana ara-politika, izy ireo ihany koa ny nametraka ny seranan-tsambo. Ary izy ireo koa dia nanompo ny batisan ny jentilisa tompon-tany.
Ampiharina dia ny 'tena hevitra', na ny fandoavana ny hetra ny olona avy amin'ny sivy ambin'ny folo ny enim-polo taona. Maro ny Filipiana ny fianakaviana ny mosary sy nijaly Ampiharina tsara izy ireo ampy hitandremana, ny fanaovana ampihimamba ny paraky, sy ny varotra galleon.
Tantaran ny Literatiora ao Filipina
Kongresi në Malolos - incidenti në filipine